Bit By Bit - နိဒါန်း - 1.5 ဤစာအုပ်၏ကောက်ကြောင်း
ဤစာအုပ်လေးကျယ်ပြန့်သုတေသနဒီဇိုင်းများမှတဆင့်ဖြစ်စဉ်များ: အပြုအမူစောင့်ကြည့်မေးမြန်းစမ်းသပ်ချက်အပြေးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းကိုဖန်ဆင်း၏။ ထိုအချဉ်းကပ်မှု၏အသီးအသီးသုတေသီများနှင့်သင်တန်းသားများအကြားကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံရေးမျိုးလိုအပ်တယ်, တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုသင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ကလူမေးခွန်းများမေးလျှင်, ငါတို့သည်အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်မျှသာသင်ယူနိုင်ဘူးအရာသငျခနျးစာယူနိုငျဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ချက်ကို run မယ်ဆိုရင်အလားတူပဲကျနော်တို့အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မေးခွန်းများမေးခြင်းဖြင့်မျှသာမဖြစ်နိုင်ပါခဲ့သောအရာတို့ကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သင်တန်းသားများနှင့်အတူပူးပေါင်းပါလျှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်သူတို့ကိုမေးခွန်းတွေမေး, ဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်ချက်မှာသူတို့ကိုမအပ်နှံသဖြင့်လေ့လာသင်ယူနိုင်ဘူးအရာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလေးချဉ်းကပ်မှုအားလုံးအနှစ် 50 အကြာအချို့ပုံစံများတွင်အသုံးပြု, ငါသလူအပေါင်းတို့သည်နေဆဲယခု မှစ. အချို့သောပုံစံအနှစ် 50 အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချတယ်ခံခဲ့ရသည်။ ကြောင်းချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်ကြီးပြင်းလာသည့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုအပါအဝင်တစ်ခုချင်းစီကိုချဉ်းကပ်ဖို့တစျခုအခနျးတှငျ, ခွငျးပွီးနောကျ, ငါကျင့်ဝတ်ဖို့အပြည့်အဝကျအခနျးမွှုပျနှံပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအမှာစကားထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းငါတတ်နိုင်သမျှစင်ကြယ်သောထိုအခန်းကြီး၏အဓိကစာသားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သွားတယ်, နှင့်အခန်းကြီးတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ရန်အရေးကြီးပါသည် bibliographic သတင်းအချက်အလက်နှင့်ထောက်ပြပါဝင်သော "ဘာဖတ်ရှုဖို့လာမယ့်" ဟုခေါ်နေတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ် ပစ္စည်း။
ရှေ့ဆက်ရှာဖွေနေ, အခန်း2( "လေ့လာခြင်းအပြုအမူ") ၌ငါသုတေသီများလူတွေရဲ့အပြုအမူကိုလေ့လာခြင်းမှဘာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှင့်မည်သို့ဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်, ငါကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကြီးတွေဒေတာသတင်းရင်းမြစ်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်တိကျသောအရင်းအမြစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝေး Abstracting, ငါက 10 ဘုံကြီးဒေတာအရင်းအမြစ် features တွေနဲ့ဘယ်လိုသုတေသနအတွက်ဤဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ကိုအသုံးပြုဖို့ဤသက်ရောက်မှုသုတေသီများ '' စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ငါအောင်မြင်စွာကြီးတွေဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသင်ယူရန်အသုံးပြုနိုင်သုံးသုတေသနမဟာဗျူဟာသရုပျဖျောပါလိမ့်မယ်။
အခန်း3ခုနှစ်တွင် ( "မေးခွန်းများကိုမေး"), ငါသုတေသီများကြီးတွေဒေတာ preexisting ကျော်လွန်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့်ဘာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်, ငါကလူမေးခွန်းတွေမေးအသုံးပြုပုံသုတေသီများသူတို့အလွယ်တကူမယ့်အမူအကျင့်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်နေဖြင့်လေ့လာသင်ယူလို့မရဘူးအရာသငျခနျးစာယူနိုငျကွောငျးဖျောပွပါလိမ့်မယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ငါရိုးရာစုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ငါဒီဂျစ်တယ်ခေတ်နှစ်ခုလုံးကိုနမူနာကောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအသစ်ချဉ်းကပ်မှုဖွဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါစစ်တမ်းအချက်အလက်များနှင့်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်ပေါင်းစပ်ပြီးနှစ်ခုမဟာဗျူဟာကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
အခနျးကွီး4ခုနှစ်တွင် ( "အပြေးစမ်းသပ်ချက်"), ငါသည်သူတို့အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စစ်တမ်းမေးခွန်းများမေးကျော်လွန်ရွှေ့သည့်အခါသုတေသီများဘာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်, ငါစမ်းသပ်ချက်-ရှိရာသုတေသီကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်သုတေသီများဟာအလွန်တိကျတဲ့-enable လမ်းအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာ intervenes ထိန်းချုပ်ထား randomized ဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ငါကျွန်ုပ်တို့ယခုပွုနိုငျကွောငျးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်များ၏မျိုးနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်းနောက်ခံနှင့်အတူငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အဓိကမဟာဗျူဟာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် trade-off ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါသည်သင်တို့ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်၏တန်ခိုး၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်, ငါကြောင့်ပါဝါကိုအတူပါလာသောတာဝန်များကိုအချို့ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအချို့ဒီဇိုင်းအကွံဉာဏျနှင့်အတူကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။
အခန်း5ခုနှစ်တွင် ( "အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating"), ငါသုတေသီများလူမှုရေးသုတေသနလုပ်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်သိပ္ပံ-အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု-ထိုကဲ့သို့သော crowdsourcing နှင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ပုံကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအသုတေသီများဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်အကြောင်း, ဒုတိယအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းလူမှုရေးသုတေသနအတွက်ကိုညွှန်ပြနိုင်သော, ပထမဦးဆုံးနှင့်: အောင်မြင်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းများအတွက်ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်အနည်းငယ် key ကိုစည်းရုံးရေးအခြေခံမူပေးအသုံးပြုပုံငါနှစ်ခုအရာများကိုသင်တို့အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မျှော်လင့်ပါတယ် ယခင်ကမဖြစ်နိုင်သလိုပဲခဲ့ကွောငျးပြဿနာများကို။
အခန်း6( "ကျင့်ဝတ်") ၌ငါသုတေသီများသင်တန်းသားများကိုကျော်လျှင်မြန်စွာတိုးပွားလာအာဏာရှိသည်နှင့်ဤစွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်း, စည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ကြောင်းကိုငြင်းပါလိမ့်မယ်။ အာဏာကိုအသုံးပြုရပါမည်ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်တိုးမြှင့်အာဏာနှင့်မရှိခြင်း၏ဤပေါင်းစပ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာကောင်းမွန်စွာအဓိပ္ပာယ်သုတေသီများထွက်ခွာမည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, ငါသည်သုတေသီများတစ်အခြေခံမူ-based ချဉ်းကပ်ချမှတ်သင့်ကြောင်းငြင်းခုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, သုတေသီများရှိပြီးသားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို-ထားတဲ့ပေးထား-နှင့်ပိုပြီးယေဘုယျကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများမှတစ်ဆင့်သကဲ့သို့ငါယူပါ့မယ်မှတဆင့်၎င်းတို့၏သုတေသနအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်မလေးထူထောင်အခြေခံမူများနှင့်သုတေသီများ '' ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလမ်းပြကူညီပေးနိုင်ပါသည်နှစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါသုတေသီများအနာဂတ်မှာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြလိမ့်မည်, ငါမတည်မငြိမ်ကျင့်ဝတ်နှင့်အတူတစ်ဦးဧရိယာထဲမှာအလုပ်လုပ်နေများအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များပူဇော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ထားကြောင်းအချို့တိကျသောလူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျအခနျး7(က "အနာဂတ်") ၌ငါစာအုပ်ကတဆင့် run သော themes များပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ပြီးတော့အနာဂတ်မှာအရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟု themes များနှင့် ပတ်သက်. ထင်ကြေးမှသူတို့ကိုအသုံးချပါလိမ့်မယ်။
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနကျနော်တို့အနာဂတ်အတွက်၏အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်များနှင့်အတူအတိတ်ကာလအဘယ်သို့ပြုသည်ကိုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးသုတေသနလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဒေတာများသိပ္ပံပညာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ပုံဖော်ပါလိမ့်မည်။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ခုခုရှိပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုသင်ယူဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်။